Artificial Intelligence (AI) mu e-commerce | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | Cloud computing, CMS uye Technology
Nei zvingave kuti izvo zvinonzi Artificial Intelligence ndiyo imwe yeanonyanya kushandiswa masisitimu ayo ako emagetsi commerce anogona kuva nawo? Ngatitangei nemhedzisiro inogona kuputswa neiyi nzira yekuvandudza kubva zvino. Nekuti zvirizvo, uye semubhizimusi chero ripi zvaro rinotsvaga kugadzirisa nekuwedzera mhedzisiro, Artificial Intelligence inogona kuve iyo chaiyo sosi yekushandisa iyo vanamuzvinabhizimusi mune iri kukura bhizinesi chikamu vanogona kuve nacho.
Iine inoshamisa makumi matatu neshanu muzana yemari yayo yese, chigadzirwa kutengesa uye kutengesa-kutengesa paAmazon e-commerce chikuva iri pakati pemutengesi wepamusoro nyaya dzekubudirira. Ndeipi tekinoroji iri kutyaira iyi shanduko modhi? Chigadzirwa cheAmazon chinokurudzira tekinoroji, iyo inonyanya kugoneswa nehungwaru hwekugadzira kana AI.
Kunze kwezvekurudziro yechigadzirwa, huchenjeri hwekugadzira mu e-commerce indasitiri iri kushandiswa nevatengesi vepamhepo kupa chatbot masevhisi, kuongorora mhinduro yevatengi, uye nekupa masevhisi akasarudzika kune vatengi vepamhepo.
1 Chiitiko cheArtificial Intelligence
2 Zvishandiso mu e-commerce
3 Kukanganisa kweAI?
4 Kugadziriswa kweAI mue-commerce?
5 Inventory manejimendi
6 E-commerce indasitiri
7 Mhinduro muzvitoro kana muzvitoro zvepamhepo
8 Ecommerce kutsvaga
9 Tekinoroji seyakajeka bheji
10 Tarisa pane vangangove vatengi
Chiitiko cheArtificial Intelligence
Muchokwadi, chidzidzo chakaitwa naUbisend mu2019 chakawana kuti 1 muvatengi vatengi vari kuda kutenga zvinhu kana masevhisi kubva kuchatbot, nepo 5% yevatengi vepamhepo vachitsvaga madhiri makuru uye kutenga zvinopihwa kubva kumachatbots.
Nepo pasirese e-commerce yekutengesa ichifungidzirwa kusvika kumadhora 4.800 bhiriyoni na2021, Gartner anofungidzira kuti ingangoita 80% yekubatana kwevatengi kuchagadziriswa neAI matekinoroji (pasina chero mumiriri wevanhu) yegore ra2020.
Saka AI iri sei muEcommerce iri kuchinja ruzivo rwekutenga mu2019? Kubudikidza nechinyorwa chino, ngatitarisei kumwe kwekushandisa kwakakosha kwehungwaru hwekunyepera mu e-commerce pamwe neayo chaiwo-ehupenyu maindasitiri mienzaniso.
Artificial Intelligence iri kushandura sei chiitiko chekutenga?
Iko kushandiswa kwehungwaru hwekunyepera mukutenga pamhepo kuri kushandura iyo e-commerce indasitiri nekufungidzira nzira dzekutenga zvichibva pane zvigadzirwa zvinotengwa nevatengi uye pavanotenga ivo. Semuenzaniso, kana vatengi vepaInternet vachiwanzotenga imwe mhando yemupunga vhiki rega rega, mutengesi wepamhepo anogona kutumira vatengi ava chipo chakasarudzika chechigadzirwa ichi, kana kushandisa mushambadziro wekudzidza-wakagoneswa wechimwe chigadzirwa chinofamba zvakanaka nemupunga ndiro.
Zvishandiso mu e-commerce
Ecommerce AI maturusi kana AI-inogonesa madhijitari anobatsira, senge Google's Duplex chishandiso, vari kuvandudza hunyanzvi hwakadai sekutenga zvinyorwa zvinyorwa (kubva kuizwi rechisikirwo remutengesi) uye kunyangwe kuisa odha dzekutenga online pamhepo kwavari.
Pakati pekushandisa kukuru kweAI mue-commerce pane zvimwe zvinoshanda kupfuura vamwe kuzadzisa zvinangwa muchitoro kana pakutengesa pamhepo. Kubva pamaonero aya, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kunyangwe paine mabhenefiti mazhinji ehunyanzvi hwekugadzira muEcommerce, heano mana makuru ekushandisa kweAI yeEcommerce iri kutonga indasitiri nhasi.
Chatbots nevamwe vabatsiri. E-commerce vatengesi vari kuwedzera kutendeukira kumabhoti ekukurukura kana vabatsiri veadhijitari kuti vape 24 × 7 rutsigiro kune avo vatengi vepamhepo. Yakavakwa nehunyanzvi hwekuchenjera matekinoroji, chat bots ari kuve akaomarara uye anotendera kune ari nani mutengi ruzivo.
Pamusoro pekupa rutsigiro rwakanaka rwevatengi, chatbots dziri kuwedzera kukanganisa kweAI mue-commerce kuburikidza nemano akadai.
Kugadziriswa kwemitauro yechisikigo (kana NLP) iyo inokwanisa kududzira kusangana-kwenzwi-based nevatengi.
Kero mutengi inoda kuburikidza nekunzwisisa kwakadzama.
Kuzvidzidzira-hunyanzvi hunovabatsira kunatsiridza nekufamba kwenguva.
Ipa zvinofarirwa iwe pachako kana zvakanangwa kune vatengi.
Smart chigadzirwa kurudziro
Pakati pezvakanyanya AI zvishandiso mu e-commerce, zvakasarudzika zvigadzirwa kurudziro yevatengi vepamhepo zviri kuwedzera mitengo yekutendeuka ne915% uye avhareji odhiyo tsika ne3%. Uchishandisa hombe data, AI muEcommerce iri kukanganisa sarudzo dzevatengi nekuda kweruzivo rwayo rwekutenga zvakapfuura, zvigadzirwa zvakatsvaga, uye maitiro ekubhurawuza pamhepo.
Chigadzirwa kurudziro inopa akawanda mabhenefiti kune ecommerce vatengesi, kusanganisira:
Yakakura nhamba yevanodzoka vatengi
Kuvandudzwa kwevatengi kuchengetwa uye kutengesa
Chiitiko chakasarudzika chekutengesa kune vatengi vepamhepo
Bvumira tsika yemabhizimusi yeemail.
Kugadziriswa kweAI mue-commerce?
Yakarongedzwa pakati pemamodhi anonyanya kushanda, kusarudzika kuri pakati peAI mune ecommerce kushambadzira. Kuvaka pane yakatarwa data yakaunganidzwa kubva kune yega yega mushandisi wepamhepo, AI uye muchina kudzidza muEcommerce kuri kuwana kwakakosha mushandisi ruzivo kubva kune inogadzirwa yevatengi data.
Semuenzaniso, iyo AI-inogoneswa chishandiso, Boomtrain, inogona kuongorora data revatengi kubva kune akawanda ekubata mapoinzi (anosanganisira nharembozha, maemail macampaign, uye mawebhusaiti) kuti uone maitiro avari kuita kudyidzana pamhepo. Aya maonerwo anogonesa e-commerce vatengesi kuti vagadzire akakodzera zvigadzirwa kurudziro uye vape inowirirana mushandisi ruzivo pane ese zvishandiso.
Anoshanda ekugadzirisa manejimendi ndeyekuchengetedza iwo akakodzera mwero weyekuverenga iyo inogona kusangana nemusika kudiwa pasina kuwedzera zvisina basa masheya.
Ipo nzira yakajairika yekushomeka kwekushomeka yaive yakaganhurirwa kune zvazvino masheya mazinga, iyo AI-inogoneswa hesitori manejimendi iri kugonesa iyo nzira yekuchengetedza masheya zvichienderana nedata rine hukama ne
Maitiro ekutengesa mumakore apfuura
Zvirongwa kana kufungidzirwa shanduko mukuda kwezvigadzirwa
Zvinogoneka zvekupa-parutivi nyaya dzinogona kukanganisa huwandu hwenhamba
Mukuwedzera kune manejimendi manejimendi, AI iri kugonesa imba yekuchengetera nekumuka kwema automated marobhoti ayo anofungidzirwa kunge remangwana rehunyanzvi hwekugadzira mu e-commerce. Kusiyana nevashandi vevanhu, marobhoti eAI anokwanisa kushandiswa kuchengetedza kana kutora stock 24x7 pamwe nekutumirwa pakarepo kwezvinhu zvakarairwa mushure mekuodha kwepamhepo.
Pamusoro pekushandura iyo e-commerce indasitiri munzira dzakawanda, AI muB2B e-commerce chikamu iri kutyaira dzinoverengeka mhinduro dzekuvandudza. Ngatitarisei zvimwe zvenguva ichangopfuura indasitiri kesi zvidzidzo zvehungwaru hwekugadzira izvo zviri kukanganisa chikamu ichi.
Akangwara AI-Yakagoneswa Mhinduro yeiyo Ecommerce Indasitiri
AI-based matekinoroji ari kuunza vatengi vepamhepo kune akasiyana zvigadzirwa zvavasina kana kumboziva zviripo pamusika. Semuenzaniso, AI-based tekinoroji kambani Sentient Technologies iri kugonesa vatengesi vemadhijitari kuti vakurudzire zvigadzirwa zvitsva kune vatengi vepamhepo zvinoenderana nemaitiro avo ekutenga uye ruzivo rwe data.
Ikurudzirwa nekubudirira kweiyo Amazon Alexa chishandiso, iyi e-commerce hofori iri kuunza iyo Alexa izwi rekutenga system, iyo inobvumidza iwe kuti uongorore zvakanakisa zvezuva nezuva zveAmazon uye woisa kutenga kutenga online nezwi rako chete. Chii chimwe? Amazon Alexa inogona zvakare kukupa iwe matipi edhiropu, kusanganisira akanakisa mafashoni musanganiswa, uye fananidzo pakati pezvipfeko pane izvo zvingatarise zvakanyanya pauri.
AI mumafashoni e-commerce indasitiri iri kudzikisa huwandu hwekudzoka kwezvigadzirwa zvakatengwa kuburikidza nekutengesa kwepamhepo. Semuenzaniso, fashoni brand Zara iri kuendesa AI kugona kuratidza iwo akakodzera zvipfeko saizi (zvichibva pane muyero wemutengi) pamwe neyavo maitiro eanofarira (akasununguka kana akapfeka zvipfeko). Izvi zvinogona kubatsira iyo fashoni brand kuti idzikise chigadzirwa chayo kudzoka uye kugadzirisa kudzokorora kutenga.
Pamusoro peizvi zvitsva, AI-based mhinduro dziri kushandura iyo e-commerce indasitiri munzvimbo dzinotevera:
AI-inogonesa email kushambadzira iyo inotumira kushambadzira maemail ezve zvigadzirwa (kana masevhisi) izvo zvinofadza kune iye anogamuchira. Kuwedzera pakuverenga vanhu zvakanyanya kupfuura zvoga, maturusi eemail ekushambadzira anoita ongororo yehungwaru yemushandisi zvichienderana nemhinduro yavo uye inoenderana zvakanyanya nezvido zvemumwe mutengi.
AI-inogonesa yekushandisa cheni otomatiki iyo inogonesa inoshanda yekutengesa cheni manejimendi kune e-commerce mapuratifomu. Zvimwe zvakanaka zvinosanganisira kugona kuita sarudzo dzebhizinesi dzakanangana nevatengesi, nguva dzekutungamira, uye zvinodiwa pamusika.
Artificial intelligence-based data ongororo maturusi e e-commerce indasitiri iyo inopa dzinoverengeka mabhenefiti senge bhizinesi ungwaru, vatengi vatengi, uye online yekutengesa ongororo.
Mhinduro muzvitoro kana muzvitoro zvepamhepo
Omnichannel AI mhinduro idzo dziri kugadzira isina musono uye isingachinjiki yevatengi ruzivo pane zvidhinha nemarara uye online zvitoro zvitoro. Semuenzaniso, Sephora's AI-yakavakirwa omnichannel mhinduro dziri kushandisa mubatanidzwa weAI uye muchina kudzidza, kugadzirisa mutauro mutauro, uye kuona kwemakomputa kubvarura mukaha pakati pezvitoro nepamhepo zvevatengi zviitiko.
Sezvasimbiswa muchinyorwa chino, huchenjeri hwekugadzira mu e-commerce iri kutamba chinzvimbo chakakosha mukutyaira mhinduro dzemhinduro uye zviitiko zvevatengi. Mamwe emakesi ekushandisa ekushandisa ekuchenjera kwekugadzira mu e-commerce ndeyekutenga pamunhu, kurudziro yechigadzirwa uye manejimendi ekuverenga.
Semutengesi wepamhepo, urikufunga maitiro ekushandisa yekunyepedzera inoshanda modhi yebhizinesi rako? Yakagadzirirwa AI mumabhizimusi eEcommerce, maCountants ndeye yakasimbiswa dhata analytics mupi iyo iri kupa simba kune vatengesi vepamhepo nemhinduro dzakanangidzirwa pane chigadzirwa analytics.
Kugadzirisa dambudziko iri, Twiggle inoshandisa kugadziriswa kwemitauro yechisikigo kutetepa, kugadzirisa mamiriro, uye pakupedzisira kugadzirisa mhinduro dzekutsvaga kwevatengi vepamhepo. Imwe kambani iri kuyedza kugadzirisa e-commerce kutsvaga ndeye US-based tech kambani Clarifai. Basa rekutanga raClarifai rakanangisa pane zvinoonekwa pakutsvaga uye, sezvakataurwa pawebhusaiti yayo, software iyi "njere dzekunyepedzera dzine chiratidzo."
Iyo kambani inogonesa vanogadzira kuti vagadzire zvine hungwaru zvikumbiro izvo "kuona nyika sekuiona kwako," zvichigonesa makambani kukudziridza ruzivo rwevatengi-centric kuburikidza neyemberi mufananidzo uye vhidhiyo kuzivikanwa. Leveraging muchina kudzidza, AI software otomatiki tag, inoronga, uye nemaziso inotsvaga zvemukati nekumaka mufananidzo kana vhidhiyo maitiro.
Verenga zvakawanda nezve kwavo kudzidziswa kwavo, izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire tsika mamodheru maunogona kudzidzisa iyo AI kuti inzwisise chero pfungwa, ingave logo, chigadzirwa, aesthetic kana Pokemon. Unogona kushandisa aya matsva mamodheru, pamwe chete neakagara akavakwa mamodheru (semuenzaniso, zvakajairika, ruvara, chikafu, muchato, mafambiro, nezvimwewo) kutarisa kana kutsvaga zvinhu zvemultimedia uchishandisa keyword tag kana zvinoonekwa zvakafanana.
Tekinoroji seyakajeka bheji
Artificial intelligence technology inopa makambani mukana wemakwikwi uye inowanikwa kune vanogadzira kana makambani ehukuru hwese kana bhajeti. Muenzaniso wakanaka ndeyePinterest's yapfuura yekuvandudza kune yayo Chrome yekuwedzera, iyo inobvumidza vashandisi kusarudza chimwe chinhu kubva kune chero pikicha online, uye ndokumbira Pinterest kuburitsa zvakafanana zvinhu vachishandisa mufananidzo unoziva software.
Haisi iyo chete iyo Pinterest inosvitsa nyowani dzekutsvaga zviitiko neAI. Vatengesi vari kukurumidza kutaura zvakanaka kuti vadzvinyirire kudzora semapuratifomu esoftware ayo e-commerce mawebhusaiti anogadzira hunyanzvi hwekutsvaga kwekugona.
Kunze kwekutsvaga zvigadzirwa zvinoenderana, AI iri kubvumira vatengi kuti vawane zvigadzirwa zvinowirirana, ingave saizi, ruvara, chimiro, machira, kana kunyangwe chiratidzo. Iko kugona kwekuona kwezvirongwa izvi kwakasarudzika zvechokwadi.
Nekutanga kuwana zvinotaridza kubva pamifananidzo yakadzvanywa, software yacho inogona kubudirira kubatsira mutengi kuwana chigadzirwa chavanoda. Mutengi haachadi kuve achitenga kuti aone chimwe chinhu chavanoda kutenga.
Semuenzaniso, iwe ungangoda hembe nyowani yeshamwari kana vaviri-vanoshanda vaviri veNike kubva kujimu. Kana paine chinoonekwa, saka AI inobvumira vatengi kuti vawane nyore zvinhu zvakafanana kuburikidza neecommerce zvitoro.
Tarisa pane vangangove vatengi
Sekureva kwaConversica, ingangoita 33% yekutengesa inotungamira haiteedzerwe nekambani yekutengesa. Izvi zvinoreva kuti vangangove-pre-vanokwanisa vatengi vanofarira chigadzirwa chako kana sevhisi vanowira mune isingadzivisike mitswe.
Pamusoro pezvo, mabhizinesi mazhinji akaremerwa nedhata risingatarisike revatengi ravanoita zvishoma kana chavasina. Uhwu hunoshamisa huchenjeri hwegoridhe hunogona kushandiswa kugadzirisa kutenderera kutenderera. Semuenzaniso, kana tikanyatso tarisa indasitiri yekutengesa, kuzivikanwa kwechiso kuri kutove kushandiswa kubata mbavha nekupenengura kumeso kwavo kumakamera eCCTV.
Asi AI ingashandiswa sei kugadzirisa ruzivo rwevatengi rwekutenga?
Zvakanaka, mamwe mabhizinesi ari kushandisa kumeso kumeso kutora nguva dzekugara kwevatengi muchitoro chemuviri. Izvi zvinoreva kuti kana mutengi akapedza nguva yakati wandei nechimwe chigadzirwa, semuenzaniso iPod, ruzivo urwu runozochengeterwa kushandiswa pakushanya kwavo kunotevera.
Sezvo AI inokura, isu tinofungidzira zvakasarudzika zvinopihwa kune vatengi skrini inoenderana nenguva yakashandiswa muchitoro. Mune mamwe mazwi, omni-chiteshi vatengesi vari kutanga kuita kufambira mberi mukugona kwavo kudzokorora kune vatengi.
Chiso chekutengesa chiri kuchinja nemabhizinesi achipindura zvakananga kumutengi. Zvinoita sekunge mabhizinesi ari kuverenga pfungwa dzevatengi uye zvese nekuda kwedata rinoshandiswa neAI. Mamwe emakesi makuru ekushandisa ehungwaru hwekunyepera mu e-commerce ndezvokutenga zvakagadzirirwa vanhu. Kubhurawuza kana kutsvaga zvinhu zvemultimedia uchishandisa keyword tag.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Artificial Intelligence (AI) mu e-commerce
Kuteedzera kwevatengi muecommerce